Dad badan oo ka qaxaya magaalo ku taala Sucuudiga - BBC News Somali
Dad badan oo ka qaxaya magaalo ku taala Sucuudiga
2 Agoosto 2017
Boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ka qaxayaan magaalada bariga Sucuudiga ku taala ee Cawaamiya, halkaasi oo ay ka socdaan isku dhacyo dhexmaraya booliiska iyo shacab halkaasi degan.
Ciidamada ammaanka Sucuudiga ayaa isku dayayay illaa bishii May in dad shacab ah ay ka raraan xaafada qadiimka ah ee magaalada Cawaamiya, halkaasi oo ay dowladda sheegtey in ay kooxo hubeysan oo shiico ah ka dhigteen gabbaad.
Ugu yaraan 7 qof oo uu ku jiro qof ka tirsan booliiska ayaa ku dhintey rabshadaha illaa iyo hadda sida ay tabisey wakaalada wararka Reuters.
Dadka deegaanka qaarkood ayaa sheegey in ciidamada dowladda Sucuudiga ay si aan loo kala aabo yeelin u ridayeen rasaasta, waxayna intaasi ku dareen in hanti badan ay ku burburtey halkaas.
Qaarkood oo wali ku xayiran magaaladan ayaa dowladda ka codsaday in ay ka caawiso sidii ay uga qixi lahaayeen meesha.
Dowladda ayaa qoysas badan dajisey magaalo kale oo tan u dhow, halkaasi oo dadka la siiyey hoy iyo cunto.
Dadka shiicada ah ee degan magaalada Qatif iyo agagaarkeeda ayaa intii muddo ahba ka cabanayay in boqortooyada Sucuudiga ee suniga ah ay gacan-bidxeyn ku haysay.
Warbixin kasoo baxday Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegey in qorshaha Sucuudiga ku dumineyso xaafadan ka tirsan magaalada Cawaamiya oo jirta muddo 400 sano ah , islamarkaasina degenyihiin illaa 3,000 qof, in ay talaabadaasi tahay mid halis galineysaa goobo taariikhi ah.
Mudaaharaadyada bariga Sucuudiga ayaa biloowdey sanadkii 2011-dii markii uu dhashay kacdoonkii Carabta, wixii ka dambeeyeyna waxaa dhacayay weeraro iyo rabshado, illaa markii dambe dowladda ay dil toogasho ah ku fulisey wadaad shiico ah oo lagu magacaabo Nimir Al-Nimir sanadkii 2016-kii.
Bishii July, dowladda Sucuudiga waxa ay sidoo kale dil toogasho ah ku fulisey 4 qof oo lagu eedeeyey in ay fuliyeen falal argagixiso.
Image caption Xiisado ayaa cirka isku shareeray kaddib markii la daldalay wadaadka Shiicada ah Nimr al-Nimr bishii January
Awamiya ayaa ah halka uu ku noolaa wadaadka Shiicaha ah, Nimr al-Nimr, oo la dilay sanadkii hore kaddib markii lagu eedeeyay argagixisinnimo.